Ondry Iray Natao Sorona Mba Hanakanana Ny Lozam-pifamoivoizana Mateti-pitranga Ao Kyrgyzstan · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Novambra 2017 5:05 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Español, Français, Magyar, Türkçe, Aymara, 繁體中文, English
Lahatsoratra fiaraha-miasa avy amin'ny EurasiaNet.org, izay nosoratan'i Nurjamal Djanibekova ity manaraka ity. Nahazoana alalana ny famoahana azy indray.
“Nanome hena ho an'ireo rehetra nandalo izahay, manazava fa avy amin'Andriamanitra ny sakafo. Nivavaka izahay mba hahalavorary ny zava-drehetra miaraka amin'ireo mpamily ireo ary niangavy azy ireo mba hitandrina eny amin'ny arabe sy hanaja ny fitsipika, “hoy ilay imam, Alipbai Boroshbayev, tamin'ny EurasiaNet.org.
Nilaza ny polisy misahana ny fifamoivoizana fa olona 695 no maty noho ny lozam-pifamoivoizana tao Kyrgyzstan nandritra ny 10 volana voalohany tamin'ny taona. Mihena izany raha oharina tamin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona 2016, izay olona 771 no namoy ny ainy teny amin'ny arabe. Raha miresaka momba ny tarehimarika tamin'ity taona ity, nilaza ny polisy fa vokatry ny fandehanana mafy loatra no niteraka ny fahafatesan'ireo olona maherin'ny ampahatelo.